Muuqaal Muuqaal Ah Safarada Macaamiisha Fasaxa | Martech Zone
Haddii aadan wali is qorin, waxaan kugula talin lahaa Ka fikir Google goobta iyo warsidaha. Google waxay soo saartay waxyaabo la yaab leh oo ka caawinaya dukaamada iyo ganacsiyada inay ku kobciyaan ganacsigooda khadka tooska ah. Maqaalkii ugu dambeeyay, waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan markay indha indheeyaan 3 safar macaamiil oo caadi ah oo la arko laga bilaabo agagaarka Jimcaha Madow:
Wadada loo maro tafaariiqle lama filaan ah - laga bilaabo raadinta moobiilka, safarku wuxuu ku siinayaa aragti shakhsi gaar ah oo gorgortan ka gadanaysa khadka tooska ah.
Go'aanka ah in la dayactiro ama la beddelo - qof kale ayaa ka baaraya desktop-ka ka dibna moobiil, oo la macaamil xayeysiis ah si ugu dambeyntii loo gaaro go'aan iibsi.
Baadigoobka ciyaarta Tacaddi - gamer wuxuu baaraa iibsiga qunsulka ee soo socda, isagoo raadinaya taleefanka gacanta iyo moobilka, booqanaya goobaha tafaariiqda iyo goobaha warshadaha si uu u baaro iibsigiisa xiga.
Google waxay bixisaa qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee laga qaato, oo ay ku jiraan mugga cilmi baarista macaamiisha ay sameynayaan, ku tiirsanaanta moobiilka, iyo xaqiiqda ah in macaamiishani aysan diiradda saarin hadiyadaha.
Waxaan jeclaan lahaa inaad diirada saarto dhowr arrimood oo ah inaan laga fiirsan:
Dadku way ka dhex boodayeen aaladaha iyo dhex-dhexaadka - Waxaan dhawaan iibsaday PlayStation cusub. Waxaan ku jiray taleefankayga xoogaa markii aan daawanayay telefishanka, akhrinayay dib u eegista iyo daawashada xidhmooyinka. Kadib, markaan fadhiisto miiskeyga, waxaan eegi jiray fiidiyowyo oo aan daawan jiray fiidiyowyada dib u eegista. Xitaa waxaan booqday BestBuy dhowr jeer si aan u arko waxa ay haysteen. Saaxiibkey waa gamer weyn, sidaa darteed waxaan kula sheekeystay Facebook-ga oo waxaan sameeyay go'aan ku saabsan waxa aan iibsanayo. Ugu dambeyntiina, waxaan helay qiimo weyn oo waxaan ka iibsaday khadka tooska ah ee Wal-mart. Marka .. mobilka, desktop-ka, raadinta, bulshada, dib u eegista, iyo tafaariiqda dhammaantood door ayey ku yeesheen safarkayga.
Dadku waqti badan ayey ku qaataan cilmi baarista - Safarradan kuma jiraan kalfadhi keliya, waxay ka badan yihiin toddobaadyo iyo bilo. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in buskudku uu dhacayo, ololeyaashu isbeddelayaan, natiijooyinka raadinta ayaa soconaya… dhammaantood inta macaamilku baarayo go'aankooda soo socda ee iibsashada. Si badeecadaada ama adeeggaagu u sii ahaado mid muuqda, waa inaad si hagar la’aan ah uga ilaalisaa muuqaalka iyo qiimaha iyaga.
Dadku waxay cunaan tan cilmi baaris ah - Xitaa kuma sheegi karo inta aan aqriyay, daawaday, oo aan falanqeeyay ka hor intaanan iibsan nidaamka. Waxaan kuu sheegi doonaa in go'aanka iibsigeygu uu cabiray sidii aan u sii waday baaritaanka, in kastoo. Waxaan ugu dambeyntii ku iibsaday xirmooyinka Pro iyo VR qalabkeyga PlayStation ka dib markaan arkay dib u eegista iyo daawashada fiidiyowyada ku saabsan awoodaha. Markaan nidaamka helo, waxaan aaday dukaamaysiga mar kale si aad u hesho qalab dheeri ah! Mawduucu maahan oo keliya inuu go'aanka qaatay, sidoo kale waxay keentay iibin dheeri ah.
Waa tan faahfaahinta buuxda, Gudaha safarka wax iibsiga ee 3 maalin wax iibsadayaal ah:
Tags: iibiyahaiibsashada macaamiishaSafarka macaamiishaReviewsSuuq Goobidgo'aanka wax iibsigakula fikir Googlewalmart